Google I/O Extended Yangon - Online
CFP closes at May 20, 2022 23:30 UTC
May 20, 2022 23:30 UTC (Local)
Android, Kotlin, Flutter, Dart, Ai/ml, Web, Firebase, Cloud, Design
Submit Now! I'm Attending! May 21, 2022 May 21, 2022 Google I/O Extended Yangon UTC နှစ်စဥ် ပြုလုပ်နေကျ Google I/O ပွဲကို မကြာခင် ကျင်းပတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Google ရဲ့ အစဥ်အလာအတိုင်း I/O ပွဲမှာ နည်းပညာအသစ်တွေနဲ့ ပြောင်းလဲလာမယ့် သူတို့ရဲ့ ecosystem တွေကို မိတ်ဆက်လေ့ရှိပါတယ်။ အခု Google I/O Extended ပွဲဟာ Google ရဲ့ local community ဖြစ်တဲ့ Google Developer Group Yangon (GDG Yangon) က ပြုလုပ်မယ့် Google အသိအမှတ်ပြု ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုပွဲတွေဟာ community က နည်းပညာလေ့လာနေသူ အချင်းချင်း အသိပညာတွေ ဖလှယ်ဖို့ အခွင့်အရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ မိမိလေ့လာနေတာတွေကို ပြန်ပြီး sharing လုပ်ပေးချင်တဲ့သူတွေကို ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ Online